QR ကုတ်ကို scan ဖတ်ရုံဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် We Chat Pay ငွေလက်ခံမှုကို သုံးလစမ်းသပ်? - Yangon Media Group
QR ကုတ်ကို scan ဖတ်ရုံဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် We Chat Pay ငွေလက်ခံမှုကို သုံးလစမ်းသပ်?
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၉- QR ကုတ်အား scan ဖတ်ရုံဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းလုပ် ဆောင်နိုင်မည့် We Chat Pay ငွေလက်ခံမှုကို မန္တလေးအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်အတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်း ဆိုင်များတွင် သုံးလစမ်းသပ်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါ QR ကုတ်ဖြင့် ငွေပေး ချေမှုကွန်ရက်အားလုပ်ကိုင်ရန် ပေးပြီးပြီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် QFPay နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားခဲ့သည့်အပေါ် ယင်းသို့ မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်၁၄ဆိုင်တွင် သုံးလစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ Account Department မှ Director General ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် က ”ပေးပြီးပြီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်က နေ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကို We Chat Pay နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့လျှောက်ထားပါတယ်။ အခုဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံက တိုးရစ်တွေ အများကြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ဝင် ရောက်လာတာရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်ရွက်မယ့် ပရိုစီဂျာတွေကို ဗဟိုဘဏ်က စစ်ဆေးပြီးတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ စမ်းသပ်ကာလသုံးလခွင့် ပြုထားပါတယ်။ ဆိုင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုင် ၁၄ ဆိုင်မှာဆောင် ရွက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ WeChat ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်နိုင်ငံ လုံးမှာခွင့်ပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဧရိယာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလရှိပါတယ်။ အခုက စမ်းသပ်ကာလပါ။ ဒါအပြီးခွင့်ပြုပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ စမ်းသပ်ကာလမှာ transaction တွေ ဘယ်လိုရှိသ လဲ။ transaction flow တွေ ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကို ပေးပြီးပြီက ပြန်အသိပေးရပါမယ်။ တစ်ခုခုဆိုရင်လည်း ဗဟိုဘဏ်က ထိန်းကျောင်း ပေးဖို့ပါပဲ။ ဗဟိုဘဏ်က payment လမ်းကြောင်းတွေမှာ မှန်မှန်ကန် ကန်နဲ့ တရားဝင်နည်းလမ်းနဲ့ နိုင်ငံ ခြားငွေတွေ ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲ စီးဝင်လာဖို့ ထိန်းကျောင်းဆောင် ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မတ် ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Pan Pacific Hotel ၌ ကျင်းပသည့် ပေးပြီးပြီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
ယင်းသို့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဝင်ရောက် လာမှုတွင် အကြီးမားဆုံးသော အ ဟန့်အတားဖြစ်သည့် မြန်မာကျပ်ငွေ လုံလောက်စွာ လဲလှယ်သယ်ဆောင် ခြင်း မရှိခြင်းကြောင့် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာ ငွေပေးချေ ခြင်းအခက်အခဲအား လွယ်ကူလျင် မြန်စွာ ချောမွေ့အောင်လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပေးပြီး ငွေပေး ချေဖြေရှင်းမှုအား ပြည်တွင်းကုန် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များတွင် တပ် ဆင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံခြား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များမှ ¤င်းတို့ ကိုင်ဆောင်လာသော ငွေသားပ မာဏမျှသာ အသုံးပြုခြင်းကို မြင် တွေ့ရတော့မည်မဟုတ်ဘဲ ထို့ထက် ပို၍များပြားသော ewallet ငွေပေး ချေမှုများအား မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပေးပြီးပြီကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ Co-Founder and Managing Director ဦးစည်သူဖြိုးက ”အာမခံ ချက်အနေနဲ့ ဒါကအကုန်ဘဏ်စနစ် နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်မှာလည်း များစွာသောအမောင့် ပမာဏကို deposit ထားထားတယ်။ မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရတာက ကျွန်တော်တို့အတွက် အတွေ့အ ကြုံလည်းရတယ်။ ပြီးတော့ ထိန်းချုပ်ရလည်း လွယ်ကူတယ်။ ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ရောပေါ့။ စမ်းသပ်ကာလပြီးရင် တဖြည်းဖြည်းတိုးရစ် တွေ သွားလာတဲ့နေရာတွေမှာထပ် တိုးချဲ့သွားဖို့ရှိတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ခွင့် ပြုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ဟိုတယ်တွေ၊ တိုးရစ်တွေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မန္တလေး၊ ပုဂံ၊ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ စကော့ဈေးတွေမှာ ထပ်တိုးချဲ့ဖို့ရှိပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ယင်းစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ကာလ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါက ပေးပြီးပြီနှင့် QFPay တို့သည် အခြားသောနိုင်ငံခြားငွေ ဖြည့်သွင်း ထားသည့် လျှပ်စစ်ပိုက်ဆံအိတ်(e wallets)များဖြစ်သော ယိုးဒယား နိုင်ငံမှ Prompt Pay နှင့် Airpay၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ NETS Pay ရှိသည်တို့ကို ထပ်မံထည့်သွင်းလုပ် ဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပျူခေတ်လက်ရာများရှိသော ‘သုံးပန်လှမင်းသမီး သင်္ချိုင်းတော်’ ကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း တူးဖော် ထိန်